Joyina iDrive yethu kunye neDrive Donation Drive »iYunivesithi iHodges
Masixhase uluntu lwethu kwaye sincede abanye! IYunivesithi yaseHodges ibambisene neHarry Chapin Food Bank kunye neBrooke's Legacy Animal Rescue, ukuqokelela izinto kwiintsapho ezisweleyo kunye nabahlobo bethu abanoboya. Sijoyine ngokunikela ukusuka nge-1 kaJuni-kaJuni 15, 2020.
Shiya iminikelo yakho kwigumbi lokufikela leZakhiwo U, elibekwe apha I-4501 yeColonial Blvd., Ft. IMyers, FL 33966.
Jonga apha ngezantsi ngezimvo zomnikelo kunye neeflaya zethu zomnyhadala.
Izimvo zomnikelo kwiBhanki yokutya yaseHarry Chapin
Inyama kunye nentlanzi
Iziqhamo (iikomityi, enkonkxiweyo, ezomisiweyo)
IMacaroni kunye neCheese (ebhokisini)
Iitapile ezicujiweyo kwangoko
Izimvo zomnikelo kuLondolozo lwezilwanyana zeLifa likaBrooke
Ukutya kwenja okomileyo
Ukutya kwekati okomileyo
Amakhadi erhasi ezothutho
Intakumba / phawula ngenyanga kuthintelo
Iingxowa zenkunkuma (iilitha ezili-13)
Ukucoca kweClorox / iLysol
Iikhola zaseMartingale – bonke ubukhulu
Izitshixo ezingabuyisekiyo: i-intshi enye okanye ngaphezulu
Imigqomo yokugcina kunye neziciko
Iingxowa zeZiplock: isandwich, ikota, okanye ubungakanani begalon
Kuboniswa kwiMithombo yeendaba!
Ngeminikelo yezilwanyana zasekhaya, nceda uthumele ifoto yakho, kunye nesilwanyana sakho (esinamagama) ku taraque@hodges.edu.
Ukutya kuphela kwiminikelo eya kufotwa kwimidiya yoluntu ngexesha lokuhanjiswa.
Imibuzo? Qhagamshelana nathi!
Nxibelelana noTeresa Araque
Umnxeba: (239) 598-6274
I-4501 yeColonial Blvd., Ft. IMyers, FL 33966
tags: IDrive yokuqhuba, IHodgesU, Hlala kufutshane Yiya kude